China Adblue ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na soplaya | Kaiguan
Akpa akpa akpa Adblue n'ime igbe bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na nkwakọ ngwaahịa na uru dị mma nke ihe siri ike ma ọ bụ nke siri ike, nke na-eme ka ọ bụrụ ụzọ zuru oke na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
Ejiri plastik multilayer mee ngwugwu Adblue. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
A na-eji nkwakọ ngwaahịa Adblue kacha mma na nhicha nke gas ọdụ ụgbọ ala.
Ụdị nkwakọ ngwaahịa Adblue a maka ịsacha gas ọdụ ụgbọ ala,ọ bụghị igbe n'ime akpa gị. Ọ na-enye ndị ahịa ihe ngwungwu imewe nke na-arụ ọrụ ohiri isi na-ekesa na iji. Emepụtara ka ọ bụrụ ụdị igbe, Cheertainer nwere ikike pụrụ iche n'ichepụta ya na ihe owuwu ya. Emepụtara ya na gussets n'akụkụ nke "ụdị dabara adaba" na akpa ahụ, Cheertainer na-enye ohere maka nnyefe zuru oke n'efu.
A haziri igbe ahụ nke ọma. Dị ka ọ na-eji kaadiboodu, akụkụ niile nwere ike ibipụta, nke na-enye nnukwu nkwurịta okwu na mgbasa ozi n'elu ebe.
Ọ nwere nnukwu ihe nkwụsị dị iche iche, mmechi na valves.
Nke gara aga: 5 lita ultrasound gel akpa
Osote: Adblue Jerry Can arịa nwere nozulu
1l akpa na igbe
Akpa Aluminom Na Igbe-Vitop Bib-5l
Akpa N'ime igbe 20l
Akpa Na Igbe Maka Chemical
Akpa n'ime igbe maka ihe ọṅụṅụ
Akpa Na Igbe Mmanụ aṅụ
Akpa n'ime igbe nkwakọ ngwaahịa
Akpa Bib Na Igbe
Onye obi ụtọ
Akpa Valve Na Igbe
Japanese sake 18L akpa cheetainer n'ime igbe
Ngwungwu gburugburu ebe obibi asambodo ọkwa nri EU...